Lumbini Times | Nepal's Independent News Portal. तिहार, विज्ञान र ब्रेन :: Lumbinitimes
तिहार, विज्ञान र ब्रेन
बुधबार, कात्तिक १७, २०७८ ओम बानियाँ
नेपाली हिन्दुहरूको दोस्रो प्रमुख चाड तिहारको आफ्नै व्यवहारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक महत्व छ ।
घरघरमा दीपहरुको झिलीमिलीद्धारा मनाइने भएकाले तिहारलाई दीपावली पनि भन्ने गरिन्छ । कार्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म कागतिहार, कुकुरतिहार, लक्ष्मीपूजा (दिपावली), गाईतिहार, र भाइतिहार (टीका) गरेर पाँच दिनसम्म लगातार मनाइने यो चाड पूणर्रूपमा वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक जगमा खडा भएको देखिन्छ ।
तिहारको पहिलो दिन कागपूजाका दिनमा घरआँगनको फोहोरमैला सफा गर्ने र किम्वदन्तीका अनुसार हुलाकीको काम गर्ने कागलाई थरिथरिका परिकारहरु खुवाएर कागपुजा गरिन्छ । कुकुरतिहारका दिन घरको रखवाली गर्ने कुकुरको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनाइन्छ ।
मानिसको जीवनमा कुकुरको कति महत्व छ भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ । लक्ष्मीपूजाका दिन धनकीदेवि लक्ष्मीको पूजा र दिपावली गरेर मनाइन्छ ।
मानिसको जीवनमा धनसम्पत्ति अत्यावश्यक कुरा हो । रूपैयाँपैसा बिना मानिसको जीवन चल्न सक्दैन । आममानिसको कुरा त परै छोडौं, घरपरिवार सबकुछ त्यागेका सन्यासीलाई समेत पैसा आवश्यक पर्छ । रूपैया पैसाको यही महत्वलाई ध्यान दिएर नै लक्ष्मीपूजाको सुरुवात भएको हो । लक्ष्मीपूजाको आफ्नै किसिमको विशिष्ट महत्व छ । यो व्यवहारिक र वैज्ञानिक कुरा पनि हो ।
पौराणीक कथा अनुसार लक्ष्मी विष्णुकी पत्नी, धनकी अधिष्ठात्री देवी हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने लक्ष्मीदेवि त्यत्ति बेलाकी अर्थमन्त्री जस्तै हुन् । त्यसैले ढुकुटीको साँचो लिएर बसेकी लक्ष्मीको पूजा गरेपछि धनसम्पत्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता बसेको हो ।
जस्तो कि अहिले जसले अर्थमन्त्रीको जति पूजा गर्न सक्दछ, त्यत्ति नै बजेट निकासा पाउँछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिले लक्ष्मी तथा सरस्वती आदि जस्ता देविदेउताहरू मानव मनमस्तिष्कमा गहिरो ज्ञान राख्ने ऋषिमुनीहरू(प्राचिन वैज्ञानिकहरू) को एक महान् मनोवैज्ञानिक आविस्कार हो । यस्ता मनोवैज्ञानिक टेक्नोलोजीलाई नै चलाखीपूणर् ढंगले धर्मसंस्कृति मार्फत् जनमानसको जीवनशैलीमा ल्याइएको हो ।
लक्ष्मीपूजाको वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भनेको नै न्यूरो-कण्डिसनिङ सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पैवलवले कुकुरमा प्रयोग गरेर देखाएपछि यो सिद्धान्त पैवलवको क्लासिकल कण्डिसनिङ सिद्धान्तका नाउँमा चर्चित भएको हो ।
त्यसैले शान्त मनले एकाग्र भएर धनकी देवि लक्ष्मीको पूजाप्रर्थना गर्नुको एक मात्र उद्देश्य धनमनस्थितिको मस्तिष्क पुनर्संरचना (ब्रेन रिवाइरिंग) गर्नु हो । यो एकदम सम्भव र वैज्ञानिक कुरा हो ।
मानव मस्तिष्कमा एक असाधारण र अद्भुत लचकताको गुण हुन्छ, त्यो गुणलाई स्नायुविज्ञानको भाषामा न्यूरोप्ल्यास्टिसिटि भनिन्छ । मस्तिष्कको यही गुणका कारण नै मानिसको जीवनभरि नै मस्तिष्क पुनर्संरचना सम्भव हुन्छ ।
मस्तिष्कको पुनर्संरचनामा मनको सबै भन्दा ठूलो हात हुन्छ । एक खुंखार डाँका रत्नाकर कसरी महर्षि वाल्मिकी भए ? अगुंलीमाल जस्तो हत्यारा कसरी बुद्धको चेला बन्न पुग्यो ? के मस्तिष्क पुनर्संरचना बीना यो सम्भव थियो ? कदापि थिएन ।
सिद्धार्थ गौतम पनि जन्मिदै बुद्ध भएका होइनन्, ध्यानद्वारा मस्तिष्क पुनर्संरचना गरेर महात्माबुद्ध भएका हुन् । अतः ध्यान मन प्रशिक्षणको एक सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि हो । ध्यानको यही महत्वलाई बुझेर नै प्राचिन ऋषिमुनीहरुले धर्म र चाडपर्वका माध्यमबाट यसलाई मानिसको दैनिक जीवनमा ल्याएका हुन् ।
पुजापाठ गर्नु, प्रार्थना गर्नु, भजनकिर्तन गर्नु तथा निधारमा टीका लगाउनुको कारण पनि ध्यान नै हो । मनको प्रशिक्षण हो । निधारमा टीका लगाएपछि ध्यान कहाँ जान्छ, निधारमा । होइन र ?
गाईतिहारका दिन गाईको पूजा गरेर गाईतिहार मनाइन्छ । गाई हिन्दुहरूका लागि आमा जस्तै हुन् । त्यसैले गाईलाई गौमाता भन्ने गरिन्छ । लक्ष्मी पनि भन्ने गरिन्छ । गाईको दुःध जति पोशिलो हुन्छ, त्यत्ति नै गाईको पिसाब र गोबर गुनिलो हुन्छ ।
वास्तवमा गाई एक औषधालय हो । हिन्दुहरूको जीवनमा गोरुको पनि कम महत्व छैन । त्यसैले गोरुतिहार र गाईगोरुको संरक्षण तथा संवृद्धिका लागि गोवद्र्धनपूजा गर्ने चलन चलेको हो ।
तिहारको अन्तिम दिन भाइटीका पर्छ । यस भाइतिहारमा दिदी-बहिनी-दाजु-भाइ जम्मा भएर अष्ट चिरञ्जीवी (अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्, विभीषण, परशुराम, प्रल्हाद) र यम-यमुनाको पूजा गरी दाजुभाइलाई दिदीबहिनीले निधारमा मंगलटीका र कहिल्यै नओइलाउने मखमली फूलको माला लगाइदिएर मनाउने गरिन्छ । भाइटीकाले दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका बीचको प्रेमलाई अझ प्रगाढ र सुमधुर बनाउन सहगाउँछ ।
दसैंतिहार होस् वा कुनै पनि बेलमा होस्, निधारमा टीका लगाउने प्रचलन हाम्रा ऋषिमुनी (प्राचिन वैज्ञानिक) हरुको महान् आविस्कार हो । निधारमा टीका लगाउनुका वैज्ञानिक महत्व छ । दुई आँखीभौंको विचको भाग अर्थात् भृकुटी, जहाँ टीका लगाइन्छ, त्यो पिनियल ग्लैण्डको केन्द्र (योग विज्ञानका अनुसार आज्ञा चक्रको केन्द्र वा त्रिनेत्र) हो ।
त्यसैले यस केन्द्रमा टीका लगाउनाले आज्ञा चक्र वा पिनियल ग्लैण्ड सक्रिय हुन्छ, जसले गर्दा मस्तिष्क शक्ति तथा चेतना शक्ति बढ्छ । यो वैज्ञानिक तथ्य हो ।
तिहारमा घरलाई झिलिमिली बनाइ पुजाआजा गर्ने तथा टीका लगाउनुको साथै भैलो र देउसी खेल्ने परंपरा छ । देउसीभैलोको पनि आफ्नै समाजिक तथा मनोवैज्ञानिक महत्व छ ।
यो परम्परा मनोरञ्जनका साथसाथै सामाजिक सद्भाव विकासका लागि सुरु गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । शब्दकोशका अनुसार कार्तिक कृष्ण औंसी र गाईतिहारका दिन लक्ष्मीपूजाको उपलक्ष्यमा गाइने विशेष किसिमको गाथा वा गीत र त्यस्तो गीत घरघरमा गाउँदै हिँड्दा श्रद्धाले दिइएको चिज लिँदै हिँड्ने-सांस्कृतिक उत्सव मनाउने काम भैलो हो ।
भैलो लक्ष्मीपूजा गरेपछि मनाउने चलन हो । लक्ष्मीपूजाको वा गाईतिहारको भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट (भाइटीकाको दिन) घरघर घुम्दै एउटा (नायक)ले भटयाउँदै सहयोगीहरूले सम्याउने आसिकसूचक गाथा र सोही गाथाले गाउँदै माग्दै आसिक दिन काम देउसी हो ।
देउसी र भैलो अलग-अलग किसिमको सांस्कृतिक उत्सव हुन् । देउसी र भैलो खेल्ने दिनमात्र होइन तरिका पनि फरक छ ।
अतः तिहार विज्ञानमा आधारित सांस्कृतिक उत्सव हो । त्यसैले यस पवित्र सांस्कृतिक उत्सवलाई मौलिकरुपमा मनाउनुपर्छ । आधुनिकताको लहडमा यस पर्वमा विकृतिहरु भित्रिन दिनु हुँदैन ।
तिहारका नाममा जुवातास खेलेर परिवारलाई नै उठिवास गराउने तथा अध्याधिक मात्रामा जाँडरक्सी सेवन गरेर दुर्घटना निम्ताउने जस्ता कार्यहरु गर्नु हुँदैन । यस वर्षको तिहार पनि कोरोनाका कारण सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मनाउनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १७, २०७८, १०:२८:००
कम्युनिस्टहरु किन जातीय मुद्दा उठाउँन चाहँदैनन् ?
अन्तर्वार्ता: कम्युनिस्टहरुले जातीय मुद्दा नउठाउँदासम्म परिवर्तन असम्भव छ
जबज 'फेज आउट' भयो, अब समाजवाद
आइतबार, कात्तिक ७, २०७८ ओम बानियाँ
‘बा’ संस्कृति, ओली र गोकुलधन्दा
आइतबार, असोज ३१, २०७८ ओम बानियाँ